Sheekh Shariif oo maanta soo gaaray Muqdisho. – Hornafrik Media Network
Muqdisho-Hornafrik-Madaxweynihii hore ee Dowladihii KMG aheyd ee soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa maanta Waxaa uu soo gaaray magaalada Muqdisho.
Wafdiga Sheekh Shariif ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee Aadan Cade ku soo dhaweeyay Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Sooomaaliya, xubno ka tirsan Xisbiga Himilo Qaran iyo qeybaha kala duwan ee Bulshada.
Sheekh Shariif ayaa la filayaa inuu kulmo la qaato qeybaha kala duwan ee bushada Soomaaliyeed.
Wararka qaar ayaa sheegaya in Sheekh Shariif uu ku dhawaaqi doono hogaanka sare ee Xisbiga Himilo Qaran maalmaha soo socda.
Wariyha KNN Farxaan Maxamed Xuseen ayaa soo sheegaya in daqiiqadaha soo aadan uu Madaxweynihii hore ee Shariif Sheekh Axmed uu boqolaal dadweynaha kula hadli doono xarunta xisbiga ee ku taala meel aan ka fogeyn garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde.
Tan iyo markii uu xilka baneeyey Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed, islamarkaana looga adkaaday doorashadii Sanadkii 2017 ka dhacday muqdisho ayaa hada waxaa uu wadaa ololihiisa doorashada soo socota, isagoona xoogii ugu badnaa gelinaya Doorashada.